သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေး
Posted by မောင် ပေ on Jul 17, 2011 in Health & Fitness | 8 comments
ကိုဘမောင် နှင့် မခင်မွှေး တို့ လင်မယား အိမ်ထောင်ကြ သည် မှာ လပိုင်းမျှ သာ ရှိသေးသည် ။ သမီးရည်းစားချစ်သူ ဘဝ မှ ညားလာကြသော လင်မယား ဖြစ်သဖြင့် တစ်ယောက် ကို တစ်ယောက် အချစ်ကြီး ချစ်ကြသည် ။ အိမ်ထောင်မကြ ခင်က ကိုဘမောင် တစ်ယောက် ဆေးလိပ်သောက် ၊ ကွမ်းစား ၊ အရက်သောက် လေ့ ရှိသော်လည်း မခင်မွှေးနှင့် ညားပြီး က တဲ က အားလုံး ကို ဖြတ်လိုက်သည် ။ မခင်မွှေး ၏ တိုက်တွန်းတောင်းဆိုချက် ကြောင့်ဖြစ်သည် ။ ကိုဘမောင် ကော မခင်မွှေး ပါ ပညာတတ် များ ဖြစ်သည် ။ ယခု လည်း ကိုဘမောင် တစ်ယောက် အလုပ်မှ အိမ်အပြန် မခင်မွှေး က ရေချိုးရန် စီစဉ်ပေးပြီး ထမင်းစားခန်း မှ စောင့်နေမည် ဟု ပြောခဲ့သဖြင့် “ မိန်းမ တော့ ငါ့ ကို ပြောစရာ ရှိနေပြီ ထင်တယ် ” ဟု ဆိုကာ ရေချိုးပြီး ထမင်းစားခန်း သို့ ဝင်လာခဲ့သည် ။
“ ဒီလို ယောက်ျား ရဲ့ ၊ ဟို နေ့ က ဂျာနယ် ထဲ မှာ မိန်းမ ဖတ်လိုက်ရတဲ့ ကြေငြာ တစ်ခု ရှိတယ် … သိလား ”
“ ဘာများ ပါလိမ့် ၊ ဘယ် ရွှေဆိုင် က ဒစ်စကောင့် ချ ပြန်ပြီ တဲ့ လဲ ၊ ပြောစမ်းပါဦး မိန်းမ ရယ် ”
“ ရွှေဆိုင် မဟုတ်ပါဘူး ယောက်ျား ရဲ့ ၊ မိန်းမ တို့ နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ကျန်းမာ ရေး ကြေငြာလေး ပါ ၊ ဒီလို လေ ယောက်ျား ရဲ့ ၊ မိန်းမ လဲ အတိအကျတောင် မမှတ်မိဘူး ၊ အာရှမှာတဲ့ မိန်းမတွေ သားအိမ်ခေါင်း ကင်ဆာ နဲ့သေနေကြတယ် တဲ့ ၊ အဲဒါ ကာကွယ်ဆေး ထိုးခြင်း ဖြင့် ကာကွယ်ပါ ဆိုလား ပဲ ယောက်ျား ရဲ့”
“တိုက်ဆိုင်နေပြီ မိန်းမ ရေ ။ ဒါဆို ရင် ဒီနေ့ယောက်ျား လဲ မြန်မာတိုင်း ဂျာနယ် ဖတ်လာရတယ် ။ အဲဒီ့ထဲ က ဒီကာကွယ်ဆေး ထိုးသင့် မထိုးသင့် အင်တာဗျူး တစ်ခု ကို သေချာ ဖတ်လာခဲ့တယ် ။ ယောက်ျား ပြောပြမယ် နော် သေချာ နားထောင် ”
“ အင်း…ပြောပါဦး ”
“ ဒီလို ကွာ သားအိမ်ခေါင်း ကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေး ထိုးသင့် ၊ မထိုးသင့် ဆိုတဲ့မေးခွန်း ကို ၊ အဲဒီ သားအိမ်ခေါင်း ကင်ဆာ ကြွက်နို့ စာတမ်း နဲ့အကောင်းဆုံးစာတမ်းဆု ဒုတိယ ဆု ရထားတဲ့ သားဖွားနဲ့ မီးယပ် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ သိန်းမြင့်သူ ဆိုတဲ့ ဆရာဝန်ကြီး ကို မြန်မာ တိုင်း ဂျာနယ် က မေးထားတာ ကွာ ။ တော်တော် လေး ဖတ်လို့ ကောင်းတယ် ။ အခု ယောက်ျား ဖတ်ထားတာ ကို မိန်းမ ကို ပြောပြမယ် နော် ”
“ ပြောပါဆို ကွာ ”
“ ဆရာဝန်ကြီး ပြောထားတာ က သားအိမ်ခေါင်း ကင်ဆာ ဖြစ်စေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် အမျိုးပေါင်း ၄၀ လောက် ရှိပြီး ၊ မြန်မာနိုင်ငံ မှာ ရှိနေတဲ့ ကာကွယ်ဆေး က အဓိက အားဖြင့် ဗိုင်းရပ်စ် ၁၆ နဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် ၁၈ အတွက်ပဲ ဖြစ်တယ် တဲ့ ။ ဆရာဝန်ကြီး က ပဲခူးတိုင်းထဲ က မြို့ တွေ ရွာတွေ မှာ ရှိတဲ့ အမျိုးသမီး တွေ ကို ၂ နှစ်လောက် သုတေသန လုပ်ခဲ့တာ ကွာ ။ ဆရာဝန်ကြီး ရဲ့ တွေ့ ရှိချက် အရ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ၁၆ ကို ၂.၈၈% ၊ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ၁၈ ကို ၁.၄% ပဲ တွေ့ ရှိခဲ့တယ် တဲ့ ။ ကျန် ၉၀ % ကျော် ဗိုင်းရပ်စ် ပိုးတွေ ဟာ ၂ နှစ် အတွင်း ခန္ဓာကိုယ် ရဲ့ အော်တို ခုခံ အား ကြောင့် အလိုအလျှောက် ပျောက်သွားနိုင်ပါတယ် တဲ့ ။ ဗိုင်းရပ်စ် ပိုး ရှိတိုင်း သားအိမ်ခေါင်း ကင်ဆာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး တဲ့ ။ အခု လက်ရှိ အမျိုးသမီးထု ကြားမှာ ကာကွယ်ဆေးထိုးကြဖို့ ရေပန်းစား တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆရာဝန်ကြီး ရဲ့ အမြင်မှာ သားအိမ်ခေါင်း ကင်ဆာ ဖြစ်စေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် မျိုးပေါင်း ၄၀ လောက် ရှိတဲ့ အနက် မြန်မာနိုင်ငံ မှာ စစ်နိုင်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် ပိုး အမျိုးအစား က ၃၇ မျိုး ပဲ ရှိပါတယ် တဲ့ ။ အခုပေါ်နေတဲ့ ကာကွယ်ဆေးက ၇၀% သော ကင်ဆာ ကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ၁၆ နဲ့ ၁၈ အတွက်သာ ကာကွယ်ပေးနိုင်တာ ဖြစ်လို့ကျန်တဲ့ ၃၅ မျိုး ကို ကာကွယ်လို့ မရပါဘူး တဲ့ ။
ဗိုင်းရပ်စ် အမျိုးအစားပေါင်း ၄၀ လောက် ရှိတယ် လို့ ပြောထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံ မှာ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ အဖြစ်အများဆုံး ဗိုင်းရပ်စ် အမျိုးဟာ ဗိုင်းရပ်စ် နံပါတ် ၅၂ လို့ ဖြေထားတယ် ကွာ ။ ဒုတိယ အဖြစ်အများဆုံး က တော့ ဗိုင်းရပ်စ် နံပါတ် ၃၁ တဲ့ ။
ကာကွယ်ဆေး ကို အသက် ၉ နှစ်ကနေ ၂၆ နှစ်အတွင်း လိင် မဆက်ဆံ ရသေးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ထိုးထားရင် အကျိုးရှိနိုင်ဖွယ်ရာ ရှိတယ် တဲ့ ။ လိင်ဆက်ဆံပြီးသူတွေ ၊ အသက် ၂၆ နှစ်ကျော် သွားတဲ့ သူတွေ မှာ ထိုးရင် အကျိုးရှိချင်မှ ရှိမယ် ၊ မသေချာပါဘူး တဲ့ ။ ကာကွယ်ဆေး ကို လက်မောင်းမှာ ထိုးရပြီး ဆေးအစွမ်းဟာ ၈ နှစ်ကျော် ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ် တဲ့ ။ တစ်သက်တာ လုံးတော့ ကာကွယ်မပေးနိုင်ဘူး လို့ ဆရာဝန်ကြီး က ပြောထားတယ် ။
ဒီကာကွယ်ဆေး ကို ထိုးပြီး ရင် ခုခံအား တက်မတက် ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခုခံအားတော့ တက်နိုင်ပါတယ် ၊ ဒါပေမယ့် မသေချာပါဘူ တဲ့ ။ မြန်မာနိုင်ငံ မှာ ယနေ့ အထိ သုတေသန ပြုလုပ်ထားချင်း မရှိသေးပါဘူး တဲ့ ။ ဒီကာကွယ်ဆေး ကို အာနိသင် ရှိမရှိ မသေချာပဲ ထိုးနေကြတာ ကို တွေ့ ရတယ် တဲ့ ။
ကာကွယ်ဆေး ထိုးပြီး ရင် သားအိမ်ခေါင်း ကင်ဆာ မဖြစ်နိုင်တော့ ဘူးလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ဆရာဝန်ကြီး က ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးမှ ကင်ဆာ ဖြစ်တဲ့ သူ ကို ရော ၊ ကင်ဆာ အကြို ဖြစ်တဲ့ သူ ကို ရော ကြုံဖူး ပါတယ် တဲ့ ။ ဒီကာကွယ်ဆေး ဟာ အများဆုံး ၇၀% သော ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှု ကို ကာကွယ်ပေးတယ် ။ ၃၀ % လောက် ကို မကာကွယ်နိုင်ပါဘူး ။
တစ်ကယ် လက်တွေ့ မှာ ဘယ်လောက် ကာကွယ်တယ် ဆိုတာ မသိပါဘူး လို့ ဖြေထားတယ် ။
ရောဂါပိုး ရှိနေ သူ တစ်ယောက် ကို ကာကွယ်ဆေး ထိုးခဲ့ရင် ရောဂါ ဖြစ်ပွားနှုန်း ပိုများတဲ့ အထောက်အထား တချို့ ရှိတယ် တဲ့ ။ ၄၄.၄၆% ပိုဖြစ်နိုင်တယ် ။ ဒါကိုတော့ အတည်မပြု နိုင်သေးပါဘူး လို့ ဆရာဝန်ကြီး က ပြောထားတယ် ။ ”
“ ဟင်… ဒါဆို ၊ ဒီဟာ က မသေချာဘူးပေါ့နော် ယောက်ျား ”
“ အဲဒီလို လည်း မဟုတ်သေးဘူးလေ မိန်းမ ရဲ့ ။ ဆရာဝန်ကြီး ပြောထား ကို ဆက်ပြောပြ မယ်နော် ။
သားအိမ်ခေါင်း ကင်ဆာ ကို ကာကွယ်စရာ အခြား နည်းလမ်းများ က တော့ ယောက်ျား ၊ မိန်းမ လိင်ကိစ္စ မဖောက်ပြန်ကြဖို့ ၊ တစ်လင် တစ်မယား စနစ် ကို ကျင့်သုံးကြဖို့ ၊ လိင်ဆက်ဆံ သူ များမယ် ဆိုရင် ကွန်ဒုံး သုံးဖို့ ၊ ငယ်ငယ် ရွယ်ရွယ်နဲ့ လိင် ဆက်ဆံခြင်း မလုပ်ဖို့ ၊ ကိုယ်ဝန်တားဆေး အကြာကြီး မသုံးစွဲ ဘူး ဆိုရင် ဖြစ်နိုင်ချေ နည်းပါး တယ် လို့ ဆရာဝန်ကြီး က ဖြေထားတယ် ။
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိမရှိ ကို မိန်းမ ကိုယ် က ချွဲ ကို စစ်ဆေးကြည့်ချင်း ဖြင့် သိနိုင်ပါတယ် ၊ ဒီရောဂါ က အခြေခံ လူတန်းစား တွေ မှာ အဖြစ်များတာပါ ၊ ဒါကြောင့် တစ်နှစ် ကို ပုံမှန် တစ်ကြိမ် စစ်ဆေးနိုင်ရင် အကောင်းဆုံး ပါပဲ လို့ ဆရာဝန်ကြီး က ပြောထားတယ် ။
နောက်ဆုံး မှာ ဆရာဝန်ကြီး ပြောထားတာ က သားအိမ်ခေါင်း ကာကွယ်ဆေး ကို မိမိ ထိုးလို ရင် ထိုးပါ ။ မဖြစ်မနေ ထိုးရမယ် လို့ တော့ မပြောချင်ပါဘူး လို့ ဆိုထားတယ် ကွာ ”
“ ဒါဆို မိန်းမ ကာကွယ်ဆေး သွားမထိုးတော့ဘူး ကွာ ၊ နော် ၊ ဒါပေမယ့် စောန က ပြောတဲ့ မိန်းမ ကိုယ်က ချွဲ ကို တော့ သွား စစ်ကြည့်မယ်နော် ယောက်ျား ”
“ အေးပေါ့ မိန်းမ ရဲ့ ။ စစ်ရမှာပေါ့ ၊ ဒီတစ်ပါတ် ရုံးပိတ်ရက် ကျ ယောက်ျား ကိုယ်တိုင် လိုက်ပို့ ပေးမယ်လေ ၊ ဟုတ်ပြီလား ။ ဘာမှ မစိုးရိမ်ပါနဲ့ ကွာ ၊ မင်း ယောက်ျား မှာ က တစ်ရက် တစ်ရက် အလုပ်နဲ့ မိန်းမ နဲ့ ပဲ နှစ်ပါးသွားနေတာ ဆိုတော့ မိန်းမ စိတ်သာချ ”
“ ကောင်းပါပြီ ယောက်ျား ရယ် ၊ ယောက်ျား ကို ယုံပြီးသား ပါတော် ၊ သြော်…. စကားကောင်းနေလိုက်တာ ၊ ထမင်းတွေ ဟင်းတွေ တောင် အေးကုန်ပြီ ၊ ပြန်နွှေးလိုက်မယ်နော် ”
“ နေပါတော့ မိန်းမ ရယ် ။ ထမင်းတွေ ဟင်းတွေ အေးကုန်ပေမယ့် မိန်းမ ကို ယောက်ျား ချစ်မိတဲ့ အချစ်စိတ် က ဘယ်တော့ မှ အေးမသွားဘူး ဆိုတာ မိန်းမ အခု သိရပြီ မို့ထမင်းတွေ ဟင်းတွေ ဘယ်လောက်အေးအေး အတူ လက်ဆုံ စားကြပါစို့ ကွာ ။လာ ”
( www.mmtimes.com အတွဲ ၂၇ အမှတ် ၃၂၆ မှာ ပါတဲ့ “ သားအိမ်ခေါင်း ကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေး ထိုးသင့် မထိုးသင့် ” ဆိုတဲ့ အင်တာဗျူး ကို ဖတ်ပြီး different thinking ဖြစ်မိပါသည် ။ သို့ ဖြစ်ပါ၍ အထက်ပါအကြောင်းအရာ များ ကို စာဖွဲ့ ရေးမိပါသည် ။ အကယ်၍ ကျွန်တော် ရေးသော ပို့ စ် သည် မှားယွင်းနေခဲ့ပါ က ကျွန်တော် ၏ ညံ့ဖျင်းမှုကြောင့် ဟု သာ မှတ်ယူ ကြပါရန် ။ အားလုံး ကို ကျေးဇူးတင်ပါသည် ။ )
၇ိုး၇ိုးသားသား အိမ်ထောင်ေ၇း ဖောက်ပြန်မှု မ၇ှိ၇င် လည်းကာကွယ်၇ာတစ်မျိုးပဲ ဆိုတော.
ဆေးထိုးတာ ကြောက်တဲ. အိမ်သူတွေအတွက်လည်း ကာကွယ်နိုင်တဲ. နည်းလမ်းလေးပေါ.။
ရန်ကုန်မှာ ရှိနေတုန်းက အဲ့ဒီအကြောင်း အတော်စိတ်ဝင်စားလို့ တော်တော်လေး လေ့လာခဲ့သေးတယ်။ သားအိမ်ခေါင်းက အချွဲကို ((ပက်စမီးယား) အင်္ဂလိပ်လို မရေးတတ်လို့ပါ) စစ်လို့ သံသယရှိတယ်ဆို အသားစ ယူပြီး စစ်ပါသေးတယ်။ CIN 1 ဆိုရင်တောင် သိပ်မစိုးရိမ်ရပါဘူးတဲ့။ CIN3လောက်မှ ရောင်ခြည်နဲ့ သားအိမ်ခေါင်းကို ဖြတ်တာတို့ ဘာတို့ ကုလို့ ရပါသေးတယ်တဲ့။ဒါလည်း ညနေဆေးရုံတက် မနက်ဖက် ဖြတ်တောက်ပြီး ညနေပြန်ဆင်းရတာမို့ မေဂျာအော်ပရေးရှင်းတော့ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ တော်ရုံတော့ သားအိမ် မထုတ်ပေးဘူး။ တချို့ဆို အဲ့ဒီရောဂါ ရှိနေတာတောင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်သေးတယ်လို့ ဖတ်ခဲ့ မှတ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။ အာရှမှာ ဒုတိယအဆင့် အမျိုးသမီးတွေကို ခြိမ်းခြောက်တဲ့ ရောဂါပါတဲ့။ ကျွန်မ ဖတ်ခဲ့စဉ်ကတော့ လိင်ဆက်ဆံဖက်များတဲ့သူ၊ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အိမ်ထောင်ကျသူ၊ သားဖွားနှုန်းများသူ တွေ အဖြစ်များပါတယ်တဲ့။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်ကစပြီး ဘယ်လို ဖြစ်တာတော့ အတိအကျ မပြောနိုင်သေးပါဘူးတဲ့။ အိမ်ထောင်သည်တွေ အဖြစ်များတယ်ဆိုပေမဲ့ တခြားသူ မဖြစ်ဘူးလို့လည်း မဆိုနိုင်ဘူးလို့ ဆရာဦးစိုးလွင် ရေးတာရော၊ ဟောပြောပွဲမှာရော ဖတ်မှတ် နာယူခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခုတော့ အတော်လည်း ကြာပြီမို့ ဆေးပညာဆိုတာ တနေ့ထက်တနေ့ တိုးတက်တာမို့ သိပ်တော့ မသိတော့ပါဘူး။
Pap smear ( Papanicolaou test )
For your information, if I am not wrong,
သားအိမ်ခေါင်း ကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေး is ” Gardasil “.
In particular, it prevent သားအိမ်ခေါင်း ကြွက်နို့ (virginal warts),
If you want to take this vaccination you need to inject3doses.
( it will be initial dose, 2nd month & 6th month )
It is very expensive in Australia, around3doses x 150 $ = 450 $.
Interesting fact is it also prevent ” ကြွက်နို့ ” in male too.
Then, my wife ask me to take it & I already took it & it hurt.
So, now, I cannot get ” သားအိမ်ခေါင်း ကင်ဆာ ”
Sometime, it’s too bad to beahusband of Doctor.
( Gardasil (Merck & Co.), isavaccine for use in the prevention of certain types of human papillomavirus (HPV), specifically HPV types 16, 18, 6, and 11. HPV types 16 and 18 cause an estimated “70% of cervical cancers” and are responsible for most HPV-induced anal, vulvar, vaginal, and penile cancer cases. HPV types6and 11 cause an estimated “90% of genital warts” cases. It does not treat existing infection. Therefore, to be effective it must “be given before HPV infection” occurs. )
“70% of cervical cancers”
“90% of genital warts”
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒီသားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်နေတာကြာပါပြီ ခုလိုမျိုးကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ ဆေးစာစောင်ပို့စ်တွေကိုတင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆက်လက်အားပေးနေပါသည်။
သားအိမ်ခေါင်း ကင်ဆာ ဖြစ်ရာဖြစ်ကြောင်း အများကြီးထဲက သေးသေးလေး တခုက သားအိမ်ခေါင်း ကြွက်နို့ .. အဲဒီကြွက်နို့က ယောက်ျားနဲ့ ဆက်ဆံရင် ယောက်ျားမှာ ရှိရင် ကူးတာ ..
ဒါကြောင့် ယောက်ျားနဲ့ မဆက်ဆံခင်ကတည်းက ထိုးရမယ် လို့ ဆိုထားတယ် ..
ထိုးပင်ထိုးသော်ငြားလဲ .. အခြားအကြောင်းတွေကြောင့် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကတော့ ဖြစ်နိုင်သေးတာပဲ ..
ဒါကြောင့် အဲဒီဆရာဝန်ကြီးက ထိုးကို ထိုးရမယ်လို့ မတိုက်တွန်းတာ .. ထိုးထားရင်တော့ စိတ်မချရတဲ့ ယောက်ျားကို ယူထားမိတဲ့ မိန်းမများအတွက် ရာနှုန်း တခုခုလောက်တော့ စိတ်သက်သာရာ ရသွားမယ် ..
မျိုးရိုးကြောင့်လဲ ဖြစ်တတ်တယ် ..
လိင်ဆက်ဆံဖက် များတဲ့အခါလဲ ဖြစ်တတ်တယ်
လိင်ဆက်ဆံတဲ့ အကြိမ်ရေ များတဲ့အခါလဲ ဖြစ်တတ်တယ်
လိင်ဆက်ဆံဖက်ဆီက လိင်အင်္ဂါကြွက်နို့် ကူးလို့လဲ ဖြစ်တတ်တယ်
ဟော်မုန်းတားဆေးတွေကြောင့်လဲ ဖြစ်တတ်တယ် ..
ဒါကြောင့် ကောင်းမယ်လို့ ထင်တယ် .. ငွေလဲ တတ်နိုင်တယ် ဆိုရင် လုပ်ထားတာ မမှားပေမယ့် ..
ကျန်တဲ့ အပိုင်းကိုလဲ စိတ်ချရတယ် ..ယူမယ့် ယောက်ျားကိုလဲ စိတ်ချရတယ် ဆိုရင် .. မျက်စိမှိတ် ယုံလို့ရရင် .. မထိုးပဲနဲ့ နေလို့ရတယ် ..
ဆေးထိုးပြီးမှ ကင်ဆာဖြစ်နေသေးတယ်လို့ ဆေးကို အထင်တော့မမှားနဲ့ .. ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ဖြစ်တတ်တဲ့ အခြား အကြောင်းတွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်လို့ ဖြစ်ရတာလို့ မှတ်ပါ
သားအိမ်ခေါင်း ကင်ဆာ ကြွက်နို့ စာတမ်း နဲ့အကောင်းဆုံးစာတမ်းဆု ဒုတိယ ဆု ရထားတဲ့ “ သားဖွားနဲ့မီးယပ် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ သိန်းမြင့်သူ” ဆိုသော ဆရာဝန်ကြီး သည် သူ၏ စာတမ်း အတွက် ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး အတွင်း ရှိ မြို့ နယ် များတွင် ရက်အားဖြင့် ၇၃၀ ကျော် ၊ နှစ်နှစ်ကျော် သုတေသန ကွင်းဆင်းလေ့လာပြီး မှ စာတမ်းပြုစု ထားခြင်းဖြစ်ပါသည် ။
မီဒီယာတွေမှာ အတော်လေး ရေပန်းစားနေတဲ့ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေးက တကယ်တမ်းတော့လည်း…. ရာနှုန်းပြည့် ကာကွယ်ပေးနိုင်တာ မဟုတ်ဘူးနော် .. ။